Iindlela zokungahlanjululwa zokuvuselelwa: i-biorevitalization
Kungekudala, indlela yokubuyiswa kwejojo ​​yokuvuselela ibe yimoya, apho i-biorevitalization phakathi kwabo ihlala kwindawo ekhethekileyo. Ngaphantsi kwe-biorevitalization kuqondwa njengenkqubo yokuvuselela isikhumba sokwemvelo. Le yindlela ekuthiwa ngayo ngeenjini, ithoni, umbala kunye nokuqina kwesikhumba kubuyiselwa. Ingundoqo yesicwangciso se-biorevitalization kukuba i-low molecular hyaluronic acid ijojowe nge-intradermally, ukuze isikhumba siqale ukuvelisa i-hyaluronic acid.
Ngendlela emfutshane, ukulawulwa kwe-intradermal ye-cosmetic preparation inikezela indlela yokuziphilisa kwesikhumba.
Ulusu lubonisa iimpawu zokuqala zokuguga, xa inani le-hyaluronic acid liyehla. I-Hyaluronic acid, eveliswa emzimbeni womntu, ejongene nokunyaniseka, ubuninzi kunye nentetho yesikhumba. Indlela yohlobo lwe-biorevitalization iquka ukusetyenziswa kwe-acaluronic acid yendalo, elawulwa yi-intradermally.
Iinkqubo zenziwa yi-dermatologist-cosmetologist. Ugqirha ukhetha isixhobo, isicatshulwa sokusungula, silungiselela isicwangciso ngasinye ngasinye, sibeka inani leenkqubo. Inkqubo eqhelekileyo ibandakanya iiseshoni ezintathu okanye ezine, ithuba leeveki ezingama-2-3. Impendulo enokumelana nayo iyaphela, ekubeni isicatshulwa sisifana nese-hyaluronic acid. Xa inkqubo ye-biorevitalization iphelile, kucetyiswa ukuba ugweme utshintsho olushushu. Ngokusekelwe kwezi ngcamango, kungcono ukuba ungashenyuli i-sauna, i-sauna kunye ne-solariy ixeshana.
Injection inelungelo lokuphumeza kuphela ingcali eqinisekisiweyo eneesatifikethi esifanelekileyo sokuphunyezwa kwe-cosmetology practice. Iklinikhi yezokwelapha okanye i-salon yobuhle kufuneka ibe nesiqinisekiso esifanayo.
Ngokweengcali, i-biorevitalization inokwenziwa kuzo zonke izigulane eziye zambona ukwehla kwe-turgor, ithoni kunye nokunyaniseka kwesikhumba. Isizathu sokwenzeka kwezinto ezinjalo kubaluleke kakhulu. Iinkqubo ze-Biorevitalization zenziwa kwimeko
- Ukudakalisa amanzi kwesikhumba
-ngaphezulu kwe-elasticity kunye ne-skin turgor
- ukuguga kwesikhumba ngenxa yempembelelo engalunganga yemibala ye-ultraviolet yelanga, ukutshaya nokuxinzelela
- ukuba kuyimfuneko ukubuyisela ulusu emva kwenkqubo yokukhangela imichiza, kunye nokuvelisa i-laser
- ukuba kukho imfuneko yokuvuselela emva kokutyunjwa kweplastic plastiki
- degrees ezahlukeneyo
Phakathi kweenzuzo ze-biorevitalization zezi:
- isantya sokwenza
Faka isicelo se-biorevitalization kunokwenzeka nasiphi na isikhumba, ubuso, intamo, ukukhutshwa kwezandla, izandla. Olu buchule luvuselela ukubuyiselwa kwesikhumba, luyincinci kakhulu, lubuyisele ukunyaniseka kunye nefuthe, lusetyenzise i-microcirculation.
Ukungqinelana kwenkqubo yokwenza i-biorevitalization kubandakanya ubukho
iinkqubo zokuvuvukala kwindawo ekufuneka iphathwe ngayo
- Izifo ezingapheliyo
- ngexesha lokukhulelwa kunye nokuhlaselwa
- iimpendulo ezithintekayo kwiziyobisi
I-Biorevitalization yindlela eyaziwayo kakhulu neyasebenza. Ngombulelo kwinkqubo yokuguqula i-biorevitalization, kuba lula ukunqanda ukuguga kwesikhumba kunye namadidi ahlukeneyo ekutshintsheni kwawo, kwakunye neziphene. Emva kwalolu hlobo, ubumba luphucula kakhulu, ama-wrinkles, i-couperose kunye namabala e-pigment and couperose. Ngoncedo lwe-biorevitalization, kungekhona nje ukubonakala kwesikhumba kuphucula, kodwa kwakhona isakhiwo esiluphawu lwesiguphu esilungileyo sibuyiselwa, inkqubo yokuguga iyancipha.
Ngaba kufuneka ndiyenze iikhemikhali ukuphamba?
Iplastiki yobuso engekho yokuhlinzwa
Ubuso beKhemikhali bebukeka ekhaya, ukuphonononga
Indlela yokuzikhusela ngexesha lesondo kunye nezifo ezahlukahlukeneyo
Ushizi ekudleni komntwana
Kutheni iklabishi emhlophe iluncedo?
Indlela yokuhamba eJamani
Ukutya kweCindy Crawford
I-TOP-5: Iimpawu zeendawo ezifanelekileyo kunye nezindlu zokubhoda zaseCrimea